FBI OO KU RAAD-JOOGTA RAG DHACAY MAALIIYIN DOLLAR | Togdheer News Network
FBI OO KU RAAD-JOOGTA RAG DHACAY MAALIIYIN DOLLAR
Hay’adda FBI ee dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay 80 qof oo budhacadda casriga ah
Dadkaasi intooda badanna waa muwaaddiniin Nigeeriyaan ah”, iyaga oo ay dadkaasi ka qayb qaateen iney malaayiin doolar dhaceen, ayuu yiri xeer ilaaliyaha dalkaasi.
Inkasta oo ay dadkaasi diideen dambiga la sheegay iney galeen wax shaqa ahna ay ku lahayn.
Booliska dalka Mareykanka ilaa iyo hadda waxay qabqabteen 11 qof, halka ay 11-kaba ka qabteen gobolka Los Angeles oo keli ah.
Hay’adaha Mareykanku waxay sheegeen iney dhacdadani tahay “tii ugu weyneyd oo ka dhacda taariikhda dalka Mareykanka.”
Hay’adda dambi baarista Mareykanka baaritaanka ay amuurtan ka waddo ayaa qayb ka ah dadaalka lagu burburinayo shabakadaha dambiyada, ayuu yiri xeer ilaaliyaha Mareykanka Nick Hanna.
Wuxuuna intaasi ku daray “kiiskan inuu qayb ka yahay dadaalka socda ee lagu samata bixinayo shacabka Mareykanka dhibaatooyinka iyo xatooyada xagga online ay kala kulmi karaan isla-markaana dadka dambiyadaas ku lug leh caddaaladda loo horkeeno.”
FBI ayaa waxay baaritaanka kiiskan ay billaawday 2016-kii marki akaawuno bangi marar badan lacaga lagala baxay muwaaddiniinti lahaydna ay hay’adaha sharciga ku soo wargeliyeen.
Haddaba 80-ka qof ee lagu soo eedeeyey kiiska casriga ee burcadnimada dhinaca interneetka (online) ee shirqoollada lacagaha sameeya, ayuu xeer ilaaliyaha guud ee dalka mareykanka ku sheegay iney yihiin tuugada soo qabashadooda lagu raadjoogo.
Shaqsiyaadka dambigaasi looga shakisan yahay oo dibadaha ku nool
Dadka dambigaasi ku lug leh oo ay hay’adda FBI ku raad joogta ayaa laga magac dhabay iney ka mid yihiin laba nin oo u dhalatay dalka Nigeria oo lagu magacaabo Valentine Iro iyo Chukwudi Christogunus Igbokwe, iyaga oo labadaasi lala xiriiriyey iney wada shaqeyn la lahaayeen shaqsiyaadka u dhashay dalka Nigeriya ee lagu qabtay dalka Mareykanka.
Waxaana la sheegay shaqsiyaadkaasi lacagaha ay dhacaan iney u sii gudbin jireen dibadaha sida lagu sheegay gal dacwadeedka ay FBI-da gacanta ku hayso.
Dadkaasi ayaa la sheegay iney ilaa iyo hadda ay dhaceen $6 milyan oo doolar iyaga oo qorsheynayey iney dhacaan hanti dhan $46 milyan oo doolar sida uu ku soo eedeeyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka.
66 qof ee harsan oo ay weli soo qaban hay’adda FBI ayaa la rumeysan yahay iney Mareykanka dibaddiisa ku nool yihiin, “intooda badanna loo maleynayo iney ku nool yihiin dalka Nigeria.”
Shaqsiyaadkan dambiga looga shakisan yahay waxay lacagaha ay siyaaba farsameysan ay ku sii dirayeen xawaaladaha lacagaha la isugu diro ee Nigeria ku yaalla, si ay lacagaha ay dirayaan iyo dhaqdhaqaaqooda ay bangiyada iyo laamaha dowladda uga qariyaan, sida gal dacwadeedka eedda lagu sheegay.
Waxayna hay’adaha sharciga Mareykanka ay shaqsiyaadkan kiiska looga shakisan yahay ku soo oogeen.
Dadka ay burcaddan lagu raad joogo ay dhaceen waxaa ka mid ah haweeney u dhalatay Japan oo magaca gal dacwadeedkeeda lagu soo gaabiyey FK, waxaana la sheegay iney ka dhaceen $200,000 oo doolar iyaga oo u sheegay iney yihiin shirkad dheemanka ka keenta dalka Suuriya.
Waxayna haweeneydaasi lacagtaasi ay ku bixisay 35-40 jeer oo laga soo dalbaday iyada oo dalabka looga soo diray 10-15 E-mail oo kala duwan, waxayna lacagahaasi ay u kala dirtay shaqsiyaad ku sugnaa waddamada sida Mareykanka, Turkiga iyo Britain.